Loaches को माछा परिवार (फोटो)
समाचार र समाज, प्रकृति
Loaches सबै दुनिया भर फैलाउन छन्, तर unevenly। त्यहाँ तिनीहरूले अफ्रीका र दक्षिण पूर्व एशिया मा, मध्य एशिया, युरोप (उत्तरी बाहेक) मा छन्। Creepers छैन मा, अष्ट्रेलिया, अमेरिका मा फेला आर्कटिक महासागर नदीहरू। तथापि, दृश्य निरन्तर स्थानन्तरण छन्, र स्थिति परिवर्तन गर्न सकेन।
ताजापानी माछा रूस विस्तार वर्णन थिए 19 औं शताब्दीका, एल.पी. को प्रसिद्ध zoologist र popularizer Sabaneev। व्यक्तिगत बानी, जीवनशैली र हामी आफ्नो कामबाट थाह loaches को विशिष्ट सुविधाहरू।
Loaches carps को धेरै समूह छन्। बारी मा, परिवार vyunopodobnye, goltsopodobnye र botsiepodobnye: यो तीन subfamilies विभाजन गरिएको छ। साधारण र रीढदार - vyunopodobnym द्वारा सबैभन्दा हाम्रो देशमा व्यापक सहित निजी loach समावेश। Goltsopodobnyh 15 genera छ; - पानी गुफाहरु खडा समूह केही सदस्यहरू चिसो छिटो-बहने पहाड प्रवाहको, अन्य (अन्धो loach) रुचि: यो subfamily सबैभन्दा ठूलो "खुला-mindedness" देखाउनुहुन्छ।
Botsiepodobnye creepers थाईल्याण्ड, इन्डोनेसिया र भियतनाम मा व्यापक छन्। यी देशहरूमा loaches को पुराना प्रतिनिधिको पत्ता मा छ। Botia र एक जलजीवालय माछा रूपमा leptobotsii युरोप मा उपलब्ध छ। को जीनस Botsiev प्रसिद्ध जोकर, जो कुनै पनि स्टोरमा मा पाउन सकिन्छ पर्छ। loaches सम्पूर्ण परिवार पनि धेरै छैनन्, तर ichthyologists यो दिन नयाँ प्रजाति पत्ता लगाउन जारी।
Loaches बाँच्न र तल नजिकै खुवाउन। यो सुविधा loach को उपस्थिति निर्धारण गरिन्छ: - एक सानो सिधा शिर परिवारको सबै सदस्य एक lengthened शरीर, bruskovatoe वा ribbonlike, कहिलेकाहीं छ। मुख loaches तल स्थित छ। फिन छोटो पृष्ठीय। प्राथमिकताको धेरै खोक्रो र राम्ररी क्षति loach देखि शरीर सुरक्षा खकार संग लेपित मात्रा। तर, पनि पूर्ण नग्न माछा छन्। आँखा सानो। केही प्रजाति तिनीहरूले (फेरि सुरक्षाको लागि) एक पारदर्शी छाला ढाकिएको छन्। को एन्टेनाइग्यालेक्सिज - परिवार को प्रत्येक प्रतिनिधि को आवश्यक विशेषता।36 जोडी देखि हुन सक्छ। Nares loach लम्बी ट्यूब हो। Creepers र Botia त्याग दिन योग्य spikes podglaznye छन्। को स्पाइक एक इंजेक्शन सुनिंनु हुन सक्छ। Podglazny स्पाइक - पशु विरुद्ध अपेक्षाकृत प्रभावकारी उपाय।
माछा loaches परिवार उज्ज्वल प्रकाश रुचि छैन र nightfall द्वारा सक्रिय छ। समग्र creepers lethargic र secretive (यो केही loaches मात्र लागू हुँदैन)। परिवार थुप्रै सदस्यहरूले माटोको वा बालुवा burying लागि propensity छ। यस्तो खडेरी रूपमा - त्यहाँ तिनीहरूले मात्र सानो क्रसटेशियन र लार्वा मा शिकार, तर बाहिर प्रतीक्षा खराब समय।
यहाँ Misgurnus fossilis, वा साधारण eel छ। फोटो ट्याक्टायल whiskers को स्थान को एक राम्रो विचार दिन्छ:
सबै भन्दा साधारण eel
Misgurnus fossilis, धेरै युरोपेली देशहरूमा silty पानी र wetlands नदी बास - परिवार को सबै भन्दा प्रसिद्ध सदस्य। Sabaneev तिनीहरूले ज्यादातर वास्तै कि रूसी माझिहरु कारण सानो आकार (25 सेमी) गर्न, हुनत केही प्रान्तहरू (जस्तै, मिन्स्क) मा, eel सूप लागि स्वादिष्ट र सजिलै उपलब्ध सामाग्री रूपमा लोकप्रिय थियो लेखे। जर्मनी, यो रक्सी खींचना बियर वा सिरका निर्णय भएको थियो। को जाडो लागि पनि सुकेको loach।
वास्तवमा, eel मात्र होइन खोक्रो, तर विशेष आकर्षक: यो खकार ढाकिएको छ, र क्रोधोन्मत्तता में wriggling र squealing, पानी देखि झिकेर भइरहेको। सबै माछा परिवार Cobitidae मुख मा भेला र आन्द्रा को पछिल्लो खण्ड मार्फत पारित वायुमण्डलीय हावा श्वास फेर्न सक्ने क्षमता, छ। पछिल्लो र यो श्वसन अङ्गहरूको सहायक छ। हावा जान्छ, यो एक चीची गर्नु जस्तै, एक विशिष्ट ध्वनि सुने छ। आंतों साँस धेरै creepers कारगर छन् कारण तिनीहरूले यो घास कवर छ भने, बासी पानी बाल्टिन मा एक हप्ताको भन्दा बढी अवस्थित सक्छ। तसर्थ, loach तिनीहरूलाई ठूलो लागि चारा रूपमा भविष्यको लागि अक्सर भण्डारण Catfish,: माछा burbot, Pike, eel।
वास्तवमा, eel र साँच्चै स्वादिष्ट: यसको मासु, नरम चिल्लो लागेको र चाँडै पकाएको छ। एशियाई (जापानी र Indonesians) मात्र होइन mined, तर पनि खाना लागि loaches केही प्रजाति प्रकार। युरोप र loach loaches मा चारा (गर्मी मा) र (को हिउँदमा) जाल मा समातिए छन्। सानो क्रसटेशियन,: माछा परिवार loaches पशु खाना रुचि caddis लार्वा, अन्डा, कीडे र molluscs। ग्रस्त, उनको घर नजिकै पोखरी खन्न र आफ्नो loach बसोबास यदि बाट अब कष्टप्रद कीरा आवश्यक हो: सोही, eel लामखुट्टे संग copes (वा बरु, तिनीहरूको लार्वा)।
र अन्तमा, loach व्यापक एक म्यारोमीटर रूपमा प्रयोग। उहाँले वायुमण्डलीय दबाव परिवर्तनको धेरै संवेदनशील छ: सतह गर्न नाउहरु, पानी देखि protrudes, र सामान्यतया जो उहाँको लागि असामान्य छ, restlessly व्यवहार। Eel पनि भूकम्प "भविष्यवाणी" गर्न सक्नुहुन्छ।
लजीवालय मा विदेशी loaches
को 19 औं शताब्दीमा, यो, घर मा माछा गर्न प्रदर्शनियों संगठित र आफ्नो अनुभव साझेदारी सुशील भयो। किसान साधारण पक्रेको थिए नदी माछा र तिनीहरूलाई मास्को र सेन्ट पीटर्सबर्ग मा प्रत्यक्ष सुनाउँछन्। तथापि, तपाईंलाई थाहा रूपमा, रूस, अलवण जल माछा अपेक्षाकृत केही छन्। थप विविधता जस्तै aquarists। त्यसैले त्यहाँ विदेशी माछा को लागि एक मांग थियो। तर एशियाली creepers 20 औं शताब्दीको दोस्रो आधा रूस मा देखियो। पहिलो akantoftalmusy (subfamily vyunopodobnye) र Botia (subfamily botsiepodobnye) थिए। आफ्नो युरोपेली cousins जस्तै, "एशियाई" तल माछा को विभिन्न variegated रंग विशेषता हो। सबै भन्दा साधारण भेद तत्संबंधी - पहेंलो र कालो (खैरो) स्थलहरू वा धर्काहरू संयोजन।
यहाँ एक विशिष्ट akantoftalmus, wormlike धारीदार eel छ। फोटोग्राफी सबै भन्दा राम्रो छैन, तर loaches (variegated रंग, जुङ्गा, शरीर आकार, छोटो पृष्ठीय फिन) को सबै संकेत उपलब्ध छ:
loaches को सबै भन्दा प्रसिद्ध Ornamental माछा - एक botsiya जोकर (नाम उज्ज्वल, "हँसिलो" धारीदार रंग र चल्ने चरित्र द्वारा बताए देखिन्छ)। माछा को जन्म ठाउ - कलीमान्टन र सुमात्रा को द्वीप। जोकर शारीरिक - loach, torpedo लागि, अकस्मात छोटो, सघन, त्रिकोणात्मक रातो पंख संग। कारण यस्तै जीवन शैली गर्न - सामान्यतया, लम्बाइ छैन 17 भन्दा बढी सेमी छ बाहिरबाट जोकर जस्तै दक्षिण अमेरिकी Catfish, corydoras।।
यी loaches एन्टेनाइग्यालेक्सिज र podglazny स्पाइक, छ तिनीहरूले omnivorous हँसिलो र शान्तिपूर्ण छन्। यी माछा पनि श्वास आंतों गर्न सक्षम छन् तापनि तिनीहरूले पानी शुद्धता र अक्सिजन यसको संतृप्ति आधारमा युरोपेली creepers बढी छन्। साथै, तिनीहरूले तामा व्यवहार गर्न प्रादेशिक, आक्रामक माछा (जस्तै, cichlid), र लागूपदार्थ बसोबास गर्न सक्दैन। तर सामान्य, loach जोकर मा - unpretentious माछा।
उच्च Delphinium: वर्णन, संरचना, गुण र को विशेषताहरु
कहिले र कसरी एक मानिस धरती मा देखा
Cuckoo चल्ला: विवरण, फोटो। किन र जसमा cuckoo अन्डा कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग गुँड?
Hairpin सर्प: विवरण, फोटो। सर्प खानको hairpin
अफ्रिकी साभान्नाह: फोटो। पशु अफ्रिकी Savannah
ग्रीनल्याण्ड - संसारमा सबै भन्दा ठूलो द्वीप
स्ट्यु बीफ कलेजो नुस्खा: दूध, खट्टे क्रीम, प्याज र गाजर
मास्कोमा राफिसिसनबैंकका कार्यालयहरू: ठेगानाहरू, सञ्चालनको मोड, टेलिफोन हाइलाइन
लेखा नीतिहरू PBU: आवेदन र सामान्य प्रावधान
कसरी घर मा क्यान्डी बनाउने?
सांगीतिक शिक्षा बिना गिटार लागि ट्याबहरू कसरी पढ्न
जूता लागि तकिये insole खेल घाइते सुरक्षा छैन
पेट को अल्ट्रासाउंड लागि तयारी। के पेट को अल्ट्रासाउंड गर्छ?
को हिउँदमा सबै भन्दा राम्रो सूट के? बच्चाको प्रश्न - वयस्क निर्णय
इङ्गल्याण्ड, लेडी Dzheyn ग्रे को Uncrowned रानी: जीवनी, इतिहास र जीवनको रोचक तथ्य
ब्रेट पतवार - आफ्ना पिता को एक योग्य छोरा, एक पौराणिक कथा भएको छ जसले!
Nizhny Novgorod राज्य प्राविधिक विश्वविद्यालय। आर ई Alekseeva: विभाग, शाखा
जहाँ तपाईं नोवोसिबिर्स्क हिंड्न सक्छ। स्मारक, पार्क, संग्रहालय